Akụkọ - Enyo enyo enyo enyo nke Danyang City site na Jenụwarị ruo Juun 2020
Single ọhụụ Lens
CR39 1.499 Single Vision Anya
1.56 Otu ọhụụ ọhụụ
1.61 MR8 Single Vision oghere
1.67 MR7 Single Vision oghere
1.591 Polycarbonate Anya
Ọganihu / Bifocal Lens
1.499 Ewepụghị Top Bifocal Lens
1.499 Gburugburu Top Bifocal Lens
1.499 Anya na-aga n'ihu
1.56 Oghere Na-aga n'ihu
1.56 Freeform Ọganihu na-aga n'ihu
1.61 Ọganihu Na-aga n'ihu
1.56 Ewepụghị n'elu Photogray
1.56 Foto Na-aga n'ihu
Anti-Blue Ray oghere
1.56 Na-aga n'ihu Blue Cut
1.56 Foto foto Blut Block
1.61 Blue Cut oghere
1.67 Blue Cut oghere
1.591 Blue Cut oghere
Ọkara Emecha Nkecha
1.56 SV ọkara Emechara UC / HC / HMC
1.56 SV PhotoGray Semi Emechara UC / HC / HMC
1.56 Ọganihu Na-aga n'ihu Emechara UC / HC / HMC
1.56 Photogray Semi Emechara HC / HMC
1.499 Ọganihu Na-aga n'ihu Emechara UC / HC
1.499 Ewepụghị Top ọkara Emechara UC / HC
1.499 Gburugburu Top Semi Emechara UC / HC
Okpukpe ndị Danyang City gosipụtara azụmaahịa mba ofesi site na Jenụwarị ruo Juun 2020
Site na Jenụwarị ruo Juun 2020, ngụkọta uru mbubata na mbupụ nke iko Danyang bụ US $ 208 nde, mbelata afọ nke 2.26%, na-aza 14.23% nke ngụkọta mbubata na mbupụ nke Danyang. N'ime ha, mbupụ nke iko bụ US $ 189, mbelata afọ nke 4.06%, na-aza 14.26% nke mbupụ mbupụ nke Danyang; mbubata nke iko bụ nde US $ 19, mmụba kwa afọ nke 26.26%, na-eche 13.86% nke ngụkọta mbubata nke Danyang.
(Isi mmalite data: Office of Customs Zhenjiang in Danyang)
[Data] Ọnọdụ mbubata na mbupụ nke ngwaahịa iko mba dị iche iche site na Jenụwarị ruo June 2020
Site na Jenụwarị ruo June 2020, China na-ebupụ ngwaahịa iko (na ewepu ngwa na akụrụngwa) ruru ijeri US $ 2.4, mbelata afọ nke 13.95%. Site na nyocha nke ngwaahịa ngwaahịa anya: mbupụ ugogbe anya maka anwụ, iko iko na anya ndị ọzọ bụ ijeri US $ 1.451, mbelata afọ nke 5.24%, na-ede 60,47% nke ngụkọta (nke mbupụ ugogbe anya bụ US $ 548 nde, ọnụọgụ kwa afọ nke 34.81%, na-aza 22.84% nke ngụkọta); Mbupụ nke okpokolo agba bụ nde US $ 427, ọnụ ọgụgụ kwa afọ nke 30.98%, na-aza 17.78% nke ngụkọta; mbupụ nke anya m gosipụtara bụ nde US $ 461, mbelata afọ nke 15.79%, na-aza 19.19% nke ngụkọta.
Site na Jenụwarị ruo Juun 2020, China na-ebubata ngwa ahịa iko (ewepu ngwa na akụrụngwa) bụ nde US $ 574, mbelata afọ nke 13.70%. Nyochaa site na otu ngwaahịa ngwaahịa anya: ibubata ugogbe anya maka anwụ, iko iko na ihe ndị ọzọ bụ US $ 166 nde, mbelata afọ nke 19.45%, na-aza 28.96% nke ngụkọta;
Mbubata nke okpokolo agba bu nde US $ 58, onu ogugu kwa afo nke 32.25%, buru 10,11% nke ngụkọta; mbubata anya m na oghere ha bụ US $ 170, nbelata kwa afọ nke 5.13%, na-aza 29.59% nke ngụkọta; lenses contact corneal bụ nde US $ 166, mbelata afọ ọ bụla nke 1.28%, Akaụntụ maka 28.91% nke ngụkọta.
Post oge: Ọgọstụ-26-2020
Nozọ No2, New Wanbao Road, Fenghuang Industry Park, Yanling Town, Danyang City, Jiangsu Province, China
A ga-eme 18 Wenzhou International Optical Fair (WOF 2020) na Wenzhou International Convention and Exhibition Center site na Septemba 18 ruo Septemba 20, 2020! Ogologo nke e ...
SILMO ụlọ ndò na 2020 Paris Internation ...
SILMO2020, Paris International Optical and Optical Fair, na-akwado akwụkwọ ugbu a! SILMO France International Optical Fair bụ ọkachamara na-ahụ kwa afọ na mmemme ngosi mba niile. Ọ malitere na 1 ...
Danyang City iko ndị mba ọzọ trad ...
Site na Jenụwarị ruo Juun 2020, ngụkọta uru mbubata na mbupụ nke iko Danyang bụ US $ 208 nde, mbelata afọ nke 2.26%, na-aza 14.23% nke ngụkọta mbubata na mbupụ nke Danyang. Otu n'ime ...
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. ICP 备 11022256 号 -1